Iiresiphi ezingama-23 zeradish zokwenza lo Ntwasahlobo- PureWow - Ukutya
Ukuba Ngumzali Ubuhle Bomtshato Ukuhombisa Diy Uphononongo Lweemovie Ukulungiswa Kwangoko Ukomelela Iincwadi Imisebenzi Kunye Nemali Uthando Lwezesondo
Iiresiphi ezingama-23 zeradish zokwenza ngelixa baseXesheni
I-Radishes ibuhlungu kakhulu. Okokuqala, zi-crisp, peppery kwaye zibetha ibhalansi eyahlukileyo phakathi kweswekile kunye neziqholo. Banencasa entle kuyo yonke into entle ukusuka kwii-tacos ukuya kwiisaladi, kodwa zinokuguqulwa zibe ziichips, ii-noodle nangaphaya. Ngaba sithethile ikhona indlela iintlobo ezininzi ukukhetha (ivatala, isidlo sakusasa sesiFrentshi, idayikon…) kunezo zibomvu mhlawumbi uzifanekisayo? Jonga uzuko lwabo ngokwakho ngokwenza enye yezi zokupheka zeradish ezingama-23 kule ntwasahlobo.
ZIQHELEKILEYO: I-22 ye-Pea Recipes Recipes yokwenza ngelixa bakwi-Peak Freshness
UNassima Rothacker / California: Ukuphila + nokutya
1. Iisalmon Noodle Bowls ezineChili-Yuzu Relish kunye nePickled Radishes
Jonga esona sidlo sasemini esimnandi ongasoze usitye. I-watermelon radishes ekhethiweyo inika ubumnandi be-punchy kwesi sidlo sinencasa, enkosi ngeviniga yaseJapan kunye nobusi.
Eyona midlalo bhanyabhanya ihlekisayo imnyama
2. Iavokhado, iRadish kunye neeWalnuts ezinxibe iCarrot-Miso
I-crisp, i-radishes enqabileyo enqabileyo ifumana ukukhanya kwexesha lokuphila phantsi kwe-carrot miso yokugqoka. Iza kunye kwi-blender ecaleni kwescallion, ijinja entsha kunye nesosi yesosi.
3. Yonke iRadishes egcadiweyo
Bacela indawo kwindawo yakho Itafile yePasika . Bakhonze njengecala lenkukhu okanye intlanzi eyosiweyo, okanye uwasike iphepha elincinci kwaye ulidle kwi-toast ene-buttered.
4. IiCold Zemon ezibandayo
Ukukhanya okukhanyayo, okune-citrusy kwaye ngokungathandabuzekiyo kulula emehlweni, esi sidlo sihlaziyayo sifuna ukutya okuninzi kunye nemizuzu engama-20 yexesha lakho.
UAran Goyoaga / iCinnamon kunye neVanilla
5. I-Rice Bowl emnyama enamakhiwane, iRadicchio, i-Pickled Radishes kunye nePepitas
Amakhiwane aswiti + amandongomane erayisi + imifino ekrakra + i-radiny ekhethiweyo yetyuwa + iimbewu zethanga ezinetyuwa = esityeni esilungelelene ngokungagungqiyo.
Amy Neunsinger / Itheyibhile yeMagnolia, uMqulu 2
6. I-Risotto yemifuno yasentwasahlobo kaJoanna Gaines
Iiradishes, ii-ertyisi, isipinatshi, iichives, ii-mushroom-yup, imigulukudu ilapha yonke. Kwaye banambitha ukuhlamba kwasezulwini ngegalikhi-Parmesan risotto.
7. Isaladi yeebhokhwe zeCrisy Crispy
Nayiphi na isaladi ene-medallion yeshizi eyosiweyo yenye esinokuyifumana ngasemva. I-arugula, i-fennel kunye ne-radishes iphoswa kwijusi yelamuni kunye neoyile yomnquma ngaphambi kokuthweswa isithsaba ngefitter.
8. I-Sheet-Pan Lemon Butter Veggies kunye ne-Sausage
Le gem yemizuzu engama-40 ifuna uhambo oluya kwintengiso yamafama ngeeradishes, iminqathe, ipepile yentsimbi, isitshalo seqanda, iasparagus, zucchini kunye nayo yonke iitumato zetsheri.
9. Isaladi yeNiçoise ka-Aran Goyoaga
Ukusuka kwiimbotyi eziluhlaza ukuya kwitumato yamagilebhisi ukuya kwi-dill entsha, oku kugoso kwisikhalo esidala sokukhala. (Nje ukuba uzame nge-capers eqhotsiweyo, ngekhe uphinde ujonge ngasemva.)
10. I-Korean Beef Bulgogi Bowls
Iiradisi, iminqathe, ikhukhamba kunye no-anyanisi oluhlaza zenziwa ziluhlaza njenge-crisp, epholileyo, eyahlukileyo ngokutsha kwinkomo, irayisi kunye nemayonnaise yesilili.
11. Ibhotolo iMiso egcadiweyo iRadishes
Ingcebiso yepro: Musa ukulahla i-radish yakho eluhlaza. Ziyafana ne-swiss chard kwincasa kwaye yosa kakuhle e-ontini.
12. IChickpea kunye ne-Avocado Pita Tostadas kunye neRhubarb-Radish Slaw
Le recipe ibubungqina bokuba i-rhubarb kunye neeradishes zingenza ngaphezu kwepayi kunye ne-crudités, ngokulandelanayo.
Cookie kunye noKate
13. Akukho-Noodle Pad Thai
I-Daikon radish, iminqathe kunye ne-zucchini ziguqulwa zenziwa i-noodle ngokuswayipha okuncinci kwe-peeler, mandolin okanye spiralizer. Kodwa owona mmangaliso uyintloko yile sauce ye-peanut ye-ginger-lime.
zokupheka zokuzalwa kwisidlo sangokuhlwa
14. I-Chicken Gyros eyosiweyo kunye neTzatziki kunye neFeta Fry
Ngaba sicebisa ukuba sigcwalise konke ukuzaliswa kwisitya esihle kwaye sivumele iindwendwe zizakhele iigyros? (Isitya esongezelelekileyo se-tzatziki sokuntywila imifuno eluhlaza, iminquma kunye nepita ayizukulimaza, nokuba.)
15. Isaladi yeRadish neCucumber
Ngaba sisibheno semizuzu elishumi esenziwe phantse ngokupheleleyo kwiziseko zokutya? Sisayina phi?
16. UKeto uthumele iRadishes
Ubungqina bokuba ibhotolo, ityuwa nepepile zingahamba ixesha elide, nde indlela.
17. Izinongo ezikhawulezileyo ezikhethwe ngokukhawuleza
Yenza ibhetshi ukuyigcina kwifriji yakho ukuze uhlale unazo. Baza kongeza ukukhaba kwe-zingy kwi-burger, i-tacos, iisaladi, izitya zerayisi kunye nokunye.
I Intliziyo Umami
18. Simmered Daikon Radish neChicken kwiYuzu Sauce
Incasa yotyikityo olusetart-yet-sweet yejusi yenza esi sidlo. Ukuba awukwazi ukufumana izandla zakho nakweyiphi na, beka umxube welamuni kunye nejusi yelamuni ngomnwe weorenji okanye ijusi yeziqhamo.
Ityuwa kunye noMoya
19. I-Cumin egcadiweyo, Iminqathe, iRadish kunye neSaladi yeavokhado
Ngaba umama wakho ngekhe azingce ngawe ngokutya imifuno yakho xa esi sitya sisecaleni sibetha Usuku lomama itafile?
20. Inyama yehagu isilayidi
Ayiphelelanga nje ekubeni zenziwe nge-daikon radish eyenziwe ekhaya kunye ne-carrot, kodwa zikwanyibilikile nge-mayo eluhlaza. Uxolo ngelixa siphefumlela ishumi elinesibini.
21. Inkukhu Tinga Tostadas kunye noRadish Pico de Gallo
Iresiphi itshintsha iitumato zemveli zeradishes, iqhinga elihle nangaliphi na ixesha usenza ipico ngaphandle kwexesha leetumato. Ijusi yelime eyongezelelweyo iya kunceda ukunciphisa i-pepperiness kunye nokuzisa amanqaku abo eentyatyambo.
22. I-Easy Pho kunye ne-Daikon Noodles
Isiseko saseVietnam esivuyisa umphefumlo. Olu tshintsho lubandakanya i-shrimp, i-cubed tofu, ihlumelo leembotyi ze-mung, i-bok choy kunye ne-kale, kodwa zive ukhululekile ukufaka nayiphi na iprotein okanye imifuno onayo.
23. I-Cinnamon-Sugar Radish Chips
Ngubani owaziyo ukuba i-radishes ingenza idessert? Bakhonze kwi-yogurt yamaGrike ngobusi okanye nje nge-nosh kubo.
ZIQHELEKILEYO: Iimbono zeDinner zaseNtwasahlobo ezingama-70 ukubhiyozela ixesha lonyaka
Izigaba Ngamazwe Celeb Jonga Imisebenzi Kunye Nemali
isisu sokuzilolonga ukulahla amanqatha esisu
Ungatya ukutya ngokuhlwa
ilamuni kunye nesoda yokubhaka ebusweni
Unyango lwasekhaya lokubuyela kwizinwele
ezona nwele zilungileyo kwintombazana yobuso obu-okweqanda
jodie foster kunye no-alexandra hedison